Healtheries.asia (D.L.T Co.,Ltd) - Naturally Slim Fat Burner Themogenic
D.L.T Company Ltd.
ပိန်ဆေး - Naturally Slim Fat Burner Thermogenic (Made in New Zealand)
Fat/Calorie အဆီပိုများကိုလျှံမြန်စွာကျစေသောဆေးပါ။တစ်ဘူး ကုန်လျှင် ၁၈ပေါင် မှ ပေါင် ၂၂ အထိ အဆီကျဆင်းစေနိုင်ပါသည်။ Side effect လုံးဝမရှိပါကြောင်းအာမခံပါသည်။ ဒီပိန်ဆေးတွင် Thermogenic ဓာတ်ပါဝင်သောကြောင့် ကိုယ်အတွင်းတွင်ရှိသော ပိုလျှံနေတဲ့ calorie များကို မြန်မြန်လောင်ကျွမ်းစေပါသည်။ ဗိုက်စားတဲ့စိတ်၊ စိတ်တိုလာသောစိတ်များ မဖြစ်စေပါဘူး။ ကိုယ်အတွင်းရှိ Energy ကိုလဲ ထိန်းထားပေးပါသည်။ ထို ENERGY ထိန်းထားသောကြောင့် လူနှံုးနေတဲ့ပုံလုံးဝ မပေါက်စေပါဘူး။ ထိုဆေးတွင် ဆေးများ ဆိုးထားမှုလုံးဝမပါဝင်ပါ၊ Side effect လုံးဝမရှိပါကြောင်းအာမခံပါသည်။
မြန်မာ FDA ခွင့်ပြုချက် အမှတ်
တစ်ဗူးလျှင် ၇၆၉၀၀ ကျပ် (အလုံး ၃၀ ပါဝင်ပါသည်)
ထမင်းမစားခင် နာရီဝက်ကြိုသောက်ရမယ်။ ရိုးရိုးရေဖြစ် သောက်ပါ။
တနေ့ကို ၃လုံး ထက် ပိုသောက်သုံးရန်မလိုပါ။ ရှောင်ရန်- ကိုယ်ဝန်ဆောင် နိုးတ်ိုက်မိခင်တွေသောက်လိုမရပါ။
သတိပြုရန်- တခြားမိမိမှီဝဲနေသောဆေးဝါးများနှင့် တစ်နာရီခြားပြီးမှာ ပိန်းဆေးကိုသောက်ပေးပါ။
Why use Healtheries Naturally Slim Fat Burner Thermogenic capsules?
Sometimes trying to manage your weight can beacomplicated process that leaves you feeling hungry and grumpy. Wouldn’t it be nice if there was something that would help make it simpler? Healtheries Naturally Slim Fat Burner Thermogenic capsules containablend of powerful thermogenic ingredients (“thermogenic” means metabolism-boosting, which can help increase calorie burn). Fat Burner capsules also help to maintain your energy levels and ward against fatigue - just what you need when counting calories leaves youabit flat! Healtheries Naturally Slim has you covered witharange of protein powders, herbal tea and supplements that will leave you looking and feeling great. Add inahealthy calorie-controlled diet, and plenty of exercise and fluids for the perfect recipe for making slimming simpler.
Complementingahealthy calorie-controlled diet and exercise programme to make slimming simpler Supporting your metabolism Maintaining your energy levels
Have tried for one month and found it really good, lost weight over the month but was also eating pretty well as getting married, noticedakick after taking one tablet when the caffine kicked in (i only took one per day not one per meal as suggested) it didnt make me eat less or feel more full, just felt as though i had more energy. Will buy again
This product worked really well and I noticed effects afteraweek. I would recomend.
Have been taking these religiously and lost 9kgs with little effort.... loving it :) perfect forabusy mum of three
absolutely loving the healtheries fat burner capsules... lost 9kgs so am totally stoked will be buying more when these are getting low!
This product works well when combined with eating well & regular exercise. Recommend to all.
© 2016 D.L.T Company Ltd. All Rights Reserved | Powered by Apphianz